पुष २, २०७८ शुक्रबार 285
घरको एकको छोरा हुन चन्द्र बहादुर गुरुङ ,घरको एक्लो छोरा घर नफर्किय पछि छोराको बाटो कुर्दा कुर्दै तीन वर्ष पहिला चन्द्र बहादुरका बुवाको मृ’त्यु भयो। लाहुरे बन्न गएको छोरा घर फर्किन्छ भन्ने आशा मनभरी राख्दै ८२ वर्षिय आमा अहिले पनि छोरा फर्किने बाटो हेर्दै बस्छिन्।
चन्द्र बहादुर अहिले सम्पर्कमा नआएको २८ वर्ष पुग्यो अहिले उनी कस्तो अवस्थामा छन् कसैलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् यो भिडियो।
यो पनि : कोटेश्वरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । रोकिराखेको ट्रकसँग ठोक्किएर मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु भएको हो कोटेश्वरको आकाशेपुल नजिक बालकुमारीबाट कोटेश्वरतर्फ आउँदै गरेको प्र.३–०२–०२७ प ५९३७ नम्बरको मोटरसाइकल ट्रकसँग ठो’क्किएको थियो ।
ना.६ख १३५८ नम्बरको ट्रकमा ठो’क्किएर मोटरसाइकल चालक भक्तपुर ठिमी नगरपालिका–४ घर भएका ३५ वर्षीय सुरज खलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मोटरसाइकल चालकको सिनामंगल स्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो ।
यस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री वितरण गर्ने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिइ आज सार्वजनिक गरेको छ ।
महाशाखाबाट सादा पोशाकमा खटिएको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विशेष ‘अपरेसन’ सञ्चालन गरी मोटरसाइकल चोरी गर्नै समूहका सात जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
टोलीले रौतहट चन्द्रनिगाहापुर– ९ सन्तपुर घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने वर्ष १९ को नरकुमार पुडासैनीलाई गत वर्षका माघमा बानेश्वरबाट हराएको प्र ३–०२–०१३प ३६६० नं को २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी चलाइरहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
उनीमाथिको थप अनुसन्धानका क्रममा न्यूरोडबाट जुम्ला सिञ्जा गाउँपालिका– ६ घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने वर्ष २० को पुन्दलाल बुढालाई मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको जनाइएको छ ।
यही ८ गते बत्तीसपुतलीबाट हराएको बा प ०२÷०२२प ६५१८ नम्बरलाई परिवर्तन गरी बा प्र–०२–०२५ प १३९१ प्रयोग गरिरहेका बेला बुढा पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ परेका चौधरी पटक–पटक मोटरसाइकल चो”रीमा कारबाही भो’गेका व्यक्ति हुन् । रौतहटका चौधरी र कुशवाहा मोटरसाइकल चो’री गिरोहका मुख्य व्यक्ति रहेकोसमेत अनुसन्धानबाट देखिएको एसएसपी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कीर्तिपुरबाट पक्राउ परेका रञ्जीतप्रसाद गुप्ताले चोरी गरी ल्याएका मोटरसाइकललाई ग्यारेजमा सुरक्षित राख्ने, सामान फेरबदल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गुप्ता कीर्तिपुरमा रहेको रञ्जित मोटरसाइकल वर्कसपका सञ्चालकसमेत रहेको खुल्न आएको महाशाखाले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका गुप्ता र सन्तोष महर्जनले ग्राहक खोज्ने र सस्तो मूल्यमा मोटरसाइकल किनबेच गर्ने मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको महाशाखाले जनाएकोछ । उनीहरुले इञ्जिन तथा विभिन्न भाग काटेर टुक्रा पारेको अवस्थामा यही असोजमा ताहाचलबाट हराएको बा–प्र–०२–०१९प ९४९८ नं को मोटरसाइकलसमेत बरामद गरिएको महाशाखले जानकारी दिएको छ ।
प’क्राउ गरिएको मोटरसाइकल र चो’रीमा संलग्नलाई आवश्यक कारवाहीको लागि विभिन्न महानगरीय प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ ।
Prevअहिले यी पुरानो नोटको भाउ १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! यि नोट तुरुन्तै बेची लखपती बन्नुहोस ! कहाँ कसरी बेच्ने तरिका हेर्नुहोस
Nextखुसीको खबर ! पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आजदेखि नसोचेको तरिकाले घट्दै